Tratry ny taona --- Fihaonana fanao isan-taona an'ny Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2020-01-10 HITS: 47
Ny tolakandron'ny 9, 20 Janoary20, ny fivoriana fanao isan-taona an'ny Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD dia natao tao amin'ny Hotely Huang Chao New. Mpikambana maherin'ny 100 no nivory mba hankafy izany fanao isan-taona.
Ny talen'ny Jeneraly Zhu Shuangshui dia niresaka tamin'ny fivoriana: "Tamin'ny taona lasa, miaraka amin'ny ezaky ny mpiara-miasa amiko rehetra, ny orinasa telefaona an-telefaona & keypad & handset & switch switch ny orinasa dia nitazona ny fampandrosoana maharitra sy maharitra ary nahitana vokatra tsara. Ireo mpiasa rehetra ireo dia an'ny mpiasa rehetra, ary mbola hamirapiratra kokoa ny ho avy. "
Fintino ny zava-bitan'ny orinasa amin'ny taona 2019 sy ny toeran'ny vokatra eo amin'ny tsena, ary tanisao ihany koa ireo tanjona vaovao hovitaina amin'ny taona 2020, ary atsangano ny teknolojia vokatra sy ny marika Joiwo hanokatra tampon'isa vaovao afaka 20 taona.
Ity fivoriana fanao isan-taona ity dia vita amin'ny ampahany telo toy ny etsy ambany:
1. fampirantiana fampisehoana mahafinaritra
Sampana maro amin'ny orinasa no nanomana programa mihoatra ny folo amin'ity fivoriana fanao isan-taona ity ary namerina tamim-pitandremana. Tsy vitan'ny hoe nahavita tsara tamin'ny asany izy ireo, fa naneho koa ny fenitra fampisehoana matihanina amin'ny fampisehoana talenta. Mafana sy malefaka ny sehatra. Hira mozika feno fitiavana, kisarisary mahatsikaiky, nampihomehy ireo mpiara-miasa amiko teto ary nitehaka indraindray ... Feno fihobiana sy fihomehezana, firehetam-po ary tanjaka ny sehatra.
2.Fanatrehana ny lanonana
Ny zava-bita tsara indrindra tamin'ny taon-dasa dia tsy azo sarahina amin'ny asa mafy ataon'ny olona rehetra. Amin'ity fivoriana fiderana ity dia loka marobe, anisan'izany ireo mpiasa miavaka, no nomena isa-misimisy mba hiderana mpiasa miavaka.
3.Mitohy tsy ampoizina ny valopy mena
Ny rohy valopy mena dia entana efa niandrasana fatratra nandritry ny fivoriana fanao isan-taona. Mba hamelana ireo mpiasa ao amin'ny fivoriana hiverina amin'ny enta-mavesatra feno, ny tale jeneraly Zhu Shuangshui dia nanomana valopy mena be sandany be dia be tao amin'ny fety dite. Mandefasa tehaka sy fihomehezana am-pitiavana.
Manantena ny taona 2020, hanohy hiray hina izahay eo ambany fitarihan'ny mpitantana jeneraly Zhu Shuangshui ary hanohy manoratra toko vaovao.